စိုးရိမ်သောကပြေပျောက်စေရန်ဆုတောင်းပါ။ ? စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုတိုက်ထုတ်ပါ။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကင်းစေရန်ဆုတောင်းခြင်း။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုသည်မှာဘဝ၌ကောင်းသောအရာများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခများဖြစ်ပေါ်စေသောခံစားချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်လိုလျှင်သို့မဟုတ်သင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်ထည့်သွင်းပါ စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကင်းစေရန်ဆုတောင်းပဌနာ။ မသေချာမရေရာမှုနှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရန်အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်လိမ့်မည်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်အသုံးများဆုံးသိပ္ပံနည်းကျအဓိပ္ပါယ်မှာ "စိတ်မသက်မသာ၊ အလားအလာ၊ အချိုးအစားမညီမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသက်မသာဖြစ်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ"၊ ဒါပေမယ့်ဒီစကားလုံးတွေကမင်းဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုအမြဲဖော်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးလား။ ? ဒါပေမယ့်အခုမင်းကဘာကိုစိတ်ပူပန်စေသလဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးရမယ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကင်းစေရန်ဆုတောင်းပဌနာ သင်ကူညီနိုင်သည် ယနေ့တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုမှာအလုပ်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာယင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏ကဏ္ two နှစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကျရှုံးခြင်းကိုကြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြtoနာကစိုးရိမ်စရာမရှိ၊ အလုပ်အပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကကျွန်ုပ်တို့အားကျန်းမာရေးကောင်းရန်၊ ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာအစာစားခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ယခုသင်သည်သင်၏ပြproblemနာနှင့်သင်၏ဘ ၀ အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုပိုမိုသတိပြုမိလာပြီ ဖြစ်၍ သင့်အတွင်းရှိဤစိုးရိမ်မှုများအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းရှာရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့သည်ဆေးကုသမှုခံယူရန်စိတ်ပညာရှင်များကိုရှာဖွေကြသော်လည်းအလွန်ထိရောက်သောယုံကြည်ခြင်းလမ်းလည်းရှိသည်။ ဆေးကုသမှုခံယူရန်လည်းသင်အကူအညီတောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်စိုးရိမ်စိတ်ကိုကုသရန်သင်ဆုတောင်းသည့်အခါတိုင်းနေ့တိုင်းအိပ်ရာမှထလျှင်သင်၏ငြိမ်သက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟန်ချက်ညီမှုပိုများသည်။
ကိုယ်တော်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏။ လူခပ်သိမ်း၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေသည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၌စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှလွတ်မြောက်ခြင်း၏ကျေးဇူးတော်ကိုဆုတောင်းပါ၏။ သခင်ယေရှုနာမ၌ကျွန်ုပ်ကိုဤဆင်းရဲဒုက္ခမှကယ်နုတ်။ ထိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှကယ်နုတ်ပါ။ ဆက်သွယ်မှုအားလုံးနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပုံစံများကိုဖယ်ရှားကာသင်၏လွတ်မြောက်စေနိုင်သောစွမ်းအားသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးပါစေသော။ ဒီမကောင်းမှုကိုဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သော Cure, Lord, ဤပြproblemနာကို၎င်း၏အမြစ်တွင်အမြစ်တွယ်။ အမှတ်တရများ၊ မကောင်းသောအမှတ်အသားများကိုကုသပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဖြစ်တည်မှုထဲသို့ ၀ မ်းမြောက်စွာရွှင်လန်းစွာရှင်သန်နိုင်ပါစေဘုရား။ သင်၏တန်ခိုးတော်နှင့်ယေရှု၏နာမဖြင့်ငါ့သမိုင်း၊ အတိတ်နှင့်ငါ့လက်ဆောင်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။ မကောင်းသောအမှုအားလုံးမှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါ။ အထီးကျန်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခံရချိန်များ၌ကျွန်ုပ်ရှေ့မှောက်တွင်ကျွန်ုပ်အနာရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်ပြီးလွတ်မြောက်ပါစေ။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏လွတ်မြောက်ခြင်းတန်ခိုး၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ မရေရာခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ပြီးသူ၏တန်ခိုးတော်၊ သခင်၌သူ၏ကျေးဇူးတော်၌ငါမှီဝဲ၏။ စိတ်သောကရောက်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့မှလွတ်မြောက်ရန်ကျေးဇူးတော်ကိုသခင်ပေးသနားတော်မူပါ။ အာမင်။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကင်းစေရန်ဆုတောင်းပဌနာ ပိုတိုတဲ့ဟာ သင်ကစာရွက်ပေါ်တွင်ချရေးပြီးသင်စိုးရိမ်သောကရောက်သည့်အခါလုပ်နိုင်သည်။
“ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၊ ယဉ်ကျေးသောတောင်းဆိုမှုနှင့်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်း။ ငါမင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှု၊ မင်းရဲ့ကောင်းချီးနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုနည်းနည်းလောက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ သက်သာပျောက်ကင်းဖို့အတွက်ဒီပူပင်သောကကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ငါတောင်းဆိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါအဆုံးထိအမြဲကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။ အာမင်။
သခင်၊ ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုသာသိတော်မူသောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်နှိမ့်ချခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုသင့်အားဝေငှရန်သင်ယူခွင့်ရရှိရန်ဆုတောင်းပါ၏။ မင်းရဲ့လက်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်ခွာချင်တယ်၊ မင်းရဲ့ဘဝမှာမင်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုယုံကြည်ပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာစောင့်ဆိုင်းချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေးများ၊ ခံစားချက်များနှင့်အာရုံများကိုသိမ်းဆည်းပါ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်သင်၏နိုင်ငံတော်အတွက်ကောင်းကျိုးကိုသာအာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်ကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုသန့်ရှင်းစေပါ။ သို့မှသာကျွန်ုပ်သည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝြပီးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်၊ ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အားခွန်အားပေးပါ။ မင်းငါ့ကိုဂရုစိုက်နေတယ်ဆိုတာငါသိလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်သင်၏အစီအစဉ်ပြည့်စုံရန်သင်ပြသခဲ့သည့်အဆင့်တိုင်းကိုလိုက်လျှောက်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါမည်။ မင်းနဲ့မင်းရဲ့စကားလုံးတွေကိုငါယုံကြည်တယ် ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပြောပြပါမည်။ အလွန်အကျွံစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏ငါ့ကိုကုသ! မင်းကိုငါယုံကြည်တယ်မျှော်လင့်တယ် အာမင်။